Claudio Rodríguez. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Claudio Rodríguez. Cervantes Virtual.
Claudio Rodriguez, mudetembi anobva kuZamora, akafa muMadrid Pazuva rakafanana nanhasi muna 1999, apo iye aishanda pabhuku rake rekupedzisira. Ichi ndicho chimwe kusarudzwa kwevamwe vavo nhetembo kurangarira kana kuzviona.
2.1 Chipo chekudhakwa
2.2 Uku kuvhenekerwa kwenyaya ...
2.3 Zuva idzva
Degree mu Kudanana Philology, aive muverengi wechiSpanish kumaYunivhesiti e Nottingham naCambridge, izvo zvakamutendera kusangana neChirungu romantics kare Dylan Thomas, simba rakakosha pakudzidziswa kwake semudetembi. Won akati wandei prizes mune rake basa se Adonais, National Zvinyorwa, iyo Nhetembo Dzenyika kana the Muchinda Asturias weTsamba. Aive zvakare nhengo yeRoyal Spanish Academy yeMutauro.
Kujeka kunogara kuchibva kudenga;
chipo: hachiwanikwi pakati pezvinhu
asi kumusoro kumusoro, ndokuvawana
kuzviita hupenyu hwavo nebasa.
Saka zuva rinotanga; saka husiku
inovhara imba huru yemimvuri yayo.
Uye ichi chipo. Ndiani anoita zvishoma zvakasikwa
nokusingaperi kuvanhu? Chii chakakwirira vault
anozvibata murudo rwake here? Kana yatosvika
uye kuchiri kuchingoedza, kwatova kutenderera
munzira yendege dzako
uye inotenderera, uye inofamba uye, ichiri kure,
hapana chakajeka sekushuva kwako!
Ah kujeka nyota yenzira
kuzvipisa iye achiita basa rake.
Kufanana neni, sezvose zvaunotarisira.
Kana iwe watora mwenje wese,
Ndingaite sei kutarisira chero chinhu kubva mambakwedza?
Uye zvakadaro - ichi chipo - muromo wangu
mirira, uye mweya wangu wakamirira, uye iwe unondimirira,
kudhakwa kudzingirira, kusurukirwa kujekeswa
anofa sekumbundirwa kwemajeko,
asi ndinombundira kusvika kumagumo izvo zvisingamboregi.
Uku kuvhenekerwa kwenyaya ...
Uku kujekesa kwenyaya,
netsika yake uye nekuenderana kwake,
nekubata kwakadzikama kwemhino dzangu,
apo mweya unodzika
mukufunganya kwekubata kwemaoko angu
inotamba isina fungidziro,
madziro aya asina kutsemuka,
uye musuwo wakaipa, uchibuda,
apo hujaya hunobva, uye iine mwenje,
chengetedza chikwereti changu.
Mushure memazuva mazhinji asina nzira uye asina imba
uye pasina kurwadziwa kunyangwe mabhero ari ega
uye mhepo yakasviba senge yendangariro
Kana nezuro mweya wacho waive wakavanzika
uye kuoma kutarisa, pasina resin,
Ini ndaitsvaga chaiko kupenya
inouya isina kusimba uye yakapusa,
Iko kushamisika kwekujeka
kusava nemhosva kwekufungisisa,
Chakavanzika chinovhura nekuumbwa uye kushamisika
chando chekutanga nemvura yekutanga
kugeza hazelnut uye muorivhi
yatove padyo padyo negungwa.
Runyararo rwusingaoneki. Mhepo ichivhuvhuta
rwiyo rwandakanga ndisingatarisiri.
Iko kuvhenekera kwemufaro
nerunyararo rusina nguva.
Kufara kwakakomba uko kwekusurukirwa.
Uye usatarise pagungwa nekuti iro rinoziva zvese
kana nguva yacho yasvika
uko kufunga kusingasviki
asi hongu gungwa remweya,
asi hongu ino nguva yemhepo iri pakati pemaoko angu,
nerunyararo urwu rwakandimirira
-maawa maviri pamberi peusiku-
chekuzvimba kwechitatu, kunova kwangu.
Rega mhepo ipfuure nemuviri wangu
uye vhenekera. Mhepo yekumaodzanyemba, munyu,
zuva rakanyanyisa uye richangobva kuwachwa
yehukama neruregerero, uye ye
kusashivirira. Pinda, pinda mumoto wangu
ndizarurire iyo nzira
isina kumbozivikanwa: izvo zvekujeka.
Inonzwika kuva nenyota yenzvimbo,
June mhepo, yakanyanya kusununguka uye yakasununguka
mweya iwoyo, zvino chishuwo
ruzivo rwangu, kuburikidza
nyaya yakanyanya kukatyamadzwa nechipfuramabwe chako
Iwe unondirova zvakadzika sei uye unondidzidzisa
iwe, nemumhanzi wako wakajeka.
Uye kuti unosimudza sei hupenyu hwangu
kutanga uye nerudo
nemusuwo wakajeka uye wechokwadi
izvo zvinovhura kwandiri zvakadzikama
nekuti newe handina kana basa nazvo
icho chinhu chinodzikisira mweya wangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Claudio Rodríguez. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo